Rasmi: Filimka Simmba iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: Filimka Simmba iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
January 8, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 8, 2019
Filimka Simmba ayaa ganacsi adag sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna soo xareeyay 6 Crore (Trade Figure), waxaana xusid mudan in kaliya 7-filim sanadkii tagay 2018 u suura gashay Isniintooda kowaad inay Simmba ka lacag badiyaan Isniintiisa labadaad ganacsiga uu sameeyay.
Simmba haatan wuxuu soo xareeyay 196 Crore (Trade Figure) sidoo kalena wuxuu noqonaa filimka 14-aad ee 200 Crore soo xareeyo gudaha Hindiya asigoo maanta oo Talaado ah darajadan gaari doono.
Simmba 46 Crore ayuu soo xareeyay todobaadkiisa labaad afarta maalmood ugu horeyso sidoo kalena 60 Crore ayuu soo xareen doonaa todobaadkiisa labaad marka uu dhameesto. Waxaa jiraan labo filim oo Jimcadan tiyaatarada la saarayo Uri Attack iyo The Accidental Prime Minister waana hubaal inay tiyaatarada Multiplex filimka Simmba la qeebsan doonaan midaas oo ganacsiga filimkan yareyn karto todobaadkiisa sedexaad.
Simmba waa hubaal in 14-ka maalmood ugu horeyso ganacsi ahaan inuu ka sareyn doono Padmaavat balse todobaadka sedexaad laga bilaabo Simmba ganacsigiisa gaabis ayaa ku imaan doono mana gaari doono cimri ahaan lacagaha Padmaavat uu soo xareeyay oo 282 Crore gaarayay halka Simmba yoolkiisa yahay 250 Crore inuu gaaro.
Fadlan hoos kaga bogo Simmba ganacsiga uu sameeyay mudo 12-cisho ah soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Todobaadka kowaad – 150.26 Crore (Rasmi)
Jimco labaad – 9.25 Crore
Sabti labaad – 13.25 Crore
Axad labaad – 17.50 Crore
Isniin labaad – 6 Crore
Todobaadka labaad – 46 Crore (Mudo 4-maalmood)
Wadarta Guud – 196.26 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 337
Shabakada Boxoffice India (BOI) oo ku tilmaantay filimka Kesari subaxaan si wanaagsan ku furmay March 21, 2019